Izicathulo ezimnandi kunye nemilenze emihle zidinga iigrafu kwiinyawo
Ama-Ankts akufanele abe ngabadlali
Iimpawu zepeyinti njengezinto zokugqoka ezinyaweni
Xa amaqondo atshisayo atshabisa izicathulo ezintle njengezihlangu ezikhethiweyo ezinyaweni zakho, ngoko kuyafana nonyaka wonke: bonisa iinyawo zakho! Kwaye sinika izicwangciso zezinto zokugqoka ze-chic ezinyaweni.
Iigrafti ezinyaweni - ezinyawo ezinokulungiswa kakuhle njengezinto zokugqoka ze-chic
Nabani na ngoku onokukhanyisa iinzwane ezizilungeleyo kunye nezizenzekelayo kunye nokuza kunye ne-peach pace paw, ngokucacileyo inzuzo. Bobabini bezonyongweni kunye nobuhle
Kodwa umgangatho wesimo somhlaba awuyi kuphelelwa yinyameko yeenyawo ezinamatheko kunye nesicatshulwa esikhonkcekileyo okanye isihlangu seManitu.
Kuba ziphi izinto ezintle ezilungileyo, zizinyawo ezinqabileyo: ubucwebe be-chic!
Kodwa iimpawu ezifanelekileyo kufuneka zibe ziinyawo? Yaye yintoni ekufuneka ihlawulwe kule ngqungquthela yasehlobo?
Ukukhanyisa kwi-anklet yelanga kuqhubeka kukubangela ukuvakalelwa kunye nesithonjana ngasinye. Ikhonkco ixhomekeke kwi-ankle kwaye ikhangele iliso lombukeli onobubele.
Ukuba inzuzo ehambelana nayo ayithintekanga, u-Eva owonayo wenza konke okulungileyo. Nangona kunjalo, abaqalayo abaqalayo abaqalayo abazange bacinge ukuba i-circumference ye-ankle ehlotshisiwe inxulumene kakhulu nexinzelelo.
I-Anklet njengezinto zokugqoka ezinyaweni
Kulula ukubona: ukuba uyayiphakamisa inzondo ngokukhawuleza, i-ankle ithatha ubukhulu bayo. Ukuba uyaphinda uvumele ukuhamba kweenyawo kwakhona, ubona umehluko ocacileyo.
Oku kulandelayo: I-anklet ayinakunqunyulwa nangona unyawo lunzima. Kwaye oku kuthetha ukuba ubude be-anklet mazinqunywe ngumda we-ankle kwimeko enzima. Ngaphandle koko, i-accessory iya kuba msinya.
Izinzwane ezizilungele kakuhle zinomdlalo ofanayo wokuzibambisa njengeminwe ehlanjululwayo. Kodwa benza ezinye iimfuno kwiigcobo ngenxa yokuba iimeko ze-anatomical azifanelanga kuwo onke amanqanaba.
Ngenxa yalesi sizathu uthabatha umzila wesitimela oguquguqukayo unyanzeliswa ngokupheleleyo kwiinyawo. Ukongezelela, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ekuqinisekiseni ukuba ukwakhiwa kwamacangci enzwane akunakucala olubukhali kunye namaphuzu, okanye izibonelelo ezincinci. Kungenxa yokuba apha ubangele ukulimala okungokoqobo okukhuselekayo.
Iigrafti zeenyawo ezingagqabuki kwaye zihlala kuphela ehlobo? Akukho ngxaki ngeetotto ezingasigxina. Kwakhona, zizandla zika-godfather. Ngubani onomdla kule fomu yokucebisa inyawo kufuneka ahambe kwi-Mehndi. Ngenxa yokuba uHenna unayo kwindawo yonyawo ngokwayo!
Iinyawo ezintle, ubucwebe bodwa buhlala bubulungele ukujongana. Akunandaba nokuba kwenziwe ngegolide, isilivere okanye idayi yemifuno. Kukho rhoqo into eqhubekayo.
Ukuqeqesha iingcebiso zentsapho
Izixhobo ezibalulekileyo zekhaya
Ukuhlaziywa - iingcamango zendlu
Umxholo wefayile Abazalwana uGrimm - Bremen ...